Maxkamada Socdaalka oo Giriiga go’aan ka gaartay | Somaliska
Ka dib markii bishii November ay Laanta Socdaalka Sweden (Migrationsverket) joojisay in ay dadka magangalyo doonka ah ku celiso giriiga ayaa maxkamada Sare ee Socdaalka laga sugaayay in ay arinta go'aan joogto ah ka gaarto. Hadaba maxkamada ayaa go'aan ku gaartay in aan dadka lagu celin giriiga oo kiiskooda lagu baaro Sweden. Maxkamada ayaa sheegtay in giriiga lagu celiyo dadka ay xadgudub ku tahay xeerarka midowga yurub maadaama aysan soo galootigu nolol fiican ku haysan giriiga ayadoo maxkamadu sheeegtay in dadku aysan dadku haysan goobo ay ku noolaadaan iyo xitaa cunto. Arintaan ayaa xoogaa dood ka taagneyd maadaama sharciga hore ee u yaala Yurub ee lagu magacaabo Dublin uu dhigayo in qofka ay masuuliyad ka saarantahay wadanka koowaad ee uu Yurub ka soo galo oo wadamada kale ay halkaas ku celiyaan.
Ka dib markii bishii November ay Laanta Socdaalka Sweden (Migrationsverket) joojisay in ay dadka magangalyo doonka ah ku celiso giriiga ayaa maxkamada Sare ee Socdaalka laga sugaayay in ay arinta go’aan joogto ah ka gaarto.
Hadaba maxkamada ayaa go’aan ku gaartay in aan dadka lagu celin giriiga oo kiiskooda lagu baaro Sweden. Maxkamada ayaa sheegtay in giriiga lagu celiyo dadka ay xadgudub ku tahay xeerarka midowga yurub maadaama aysan soo galootigu nolol fiican ku haysan giriiga ayadoo maxkamadu sheeegtay in dadku aysan dadku haysan goobo ay ku noolaadaan iyo xitaa cunto.
Arintaan ayaa xoogaa dood ka taagneyd maadaama sharciga hore ee u yaala Yurub ee lagu magacaabo Dublin uu dhigayo in qofka ay masuuliyad ka saarantahay wadanka koowaad ee uu Yurub ka soo galo oo wadamada kale ay halkaas ku celiyaan.
Bixitaanka Al-shabaab & saameynta ay ku yeelan karto Somalida Sweden